Humanitarian Aid Archive - PixelHELPER ဖောင်ဒေးရှင်းမှလူ့အခွင့်အရေးနှင့်အလင်းအနုပညာ
04 ဇန်နဝါရီ 2016
Stream swarm အကူအညီ Software Development အသကျရှငျ
စေးကပ် post ကို By အိုလီဗာ Bienkowski On4။ ဇန်နဝါရီလ 2016
Stream swarm အကူအညီနဲ့နေထိုင်ကြသည်။ အများပြည်သူဖြစ်ရပ်များမှာအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုညှိနှိုင်းများအတွက် software ကို
မြောက်အာဖရိကမှာနေတဲ့ site ပေါ်တွင် pixels ကိုကူညီတိုက်ရိုက် Stream swarm အကူအညီဆော့ဝဲ၏ installation နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့စီမံကိန်း၏လယ်စမ်းသပ်မှုများအတွက်အချက်အလက်များဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ယခုကြှနျုပျတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ backup လုပ်ထားဆော့ဗ်ဝဲနဲ့အာဖရိကတိုက်ကြီးများ၏ပြဿနာများကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြန်အလှန်ထုတ်လုပ်မှု site ပေါ်တွင်ကျနော်တို့အတော်ကြာအပြန်အလှန်အလုပ်အကိုင်များကို set up ပါပြီ။ တစ်ဦးကအပ်ချုပ်, အစဉ်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ရှုသူများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု3ကင်မရာများ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဓါတ်ပုံတွေကိုပြသနိုင်ဖို့ချိတ်ဆက်ရန်ဂဟေဘူတာရုံတစ်ကိတ်မုန့်, ​​ရေညှိစိုက်ပျိုးခန့် 20 ကီလိုမီတာကွန်ယက်ကို cable ကို။
၁၅ ဒီဂရီကင်မရာ ဦး ခေါင်းနှင့်ဝိုင်ဖိုင်ပါသောအနောက်ဘက်တွင် ၁၅ မီတာဟိုက်ဒရောလစ်ကင်မရာရွက်တိုင်
မော်ရိုကိုအတွက် 23.06.18 ဟင်းချိုမီးဖိုချောင်ပြီးတာနဲ့
ကျနော်တို့ဆာလောင်မွတ်သိပ်သောလူမော်ရိုကိုမှ 600 ဘို့ငါတို့တိုးတက်ရေးပါတီဟင်းချိုမီးဖိုချောင်လျှော့ချပါပြီ။ မီးဖိုချောင်အတွက်အကောက်ခွန်အတွက်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာတည်ရှိပါတယ်နှင့်ကိုကြီးပြင်းရန်လိုအပ်ပါသည်, ကုန်ကျစရိတ်တွေအကြောင်း€ 400 မှပမာဏဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပီရူလိုင်းနားလယ်ယာများအတွက် tools များနှင့်အတူအဆိုပါလိမ္မော်ရောင်ကားတစ်စီး Marrakech အတွက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လက်ရှိပီရူလိုင်းနားလယ်ယာတည်ဆောက်ရန်လယ်ယာများအတွက်ရှာဖွေနေပါသည်။ ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်စီမံကိန်းအတွက်သာတဖြည်းဖြည်းရွှေ့နိုင်ပါတယ် 2500 ခန့် 2017 €အလှူငွေများ၏အနိမ့်စုစုပေါင်းအလှူငွေ။ ကျနော်တို့လယ်ယာ၏တည်နေရာပေါ် မူတည်. အနည်းဆုံးအား 600-1200 €တစ်ခုငှားရန်မျှော်လင့်ထား။ ကျွန်တော်အစာရှောင်သည်အင်တာနက် 4G ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ပိုင်းတွင်ရှိ running အနည်းဆုံး 20 ပြည်တွင်းရေး IP ကိုကင်မရာများကဲ့သို့တစ်ဦးချင်းစီ၏တည်နေရာမှာမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုပြုပါနှင့် Facebook နှင့် Twitch နှစ်ခုပြင်ပစီးပေးပို့ဖို့ရှိသည်လယ်မြေပေါ်လိုအပ်ပါတယ်အဖြစ်။
ကျနော်တို့ပြီးသား 10 ခြံကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကိုယ်နှိုက်ကအဆင်ပြေအောင်သောတစ်ဦးတည်းသာ€ 80.000 များအတွက်ရောင်းချရန်နှင့်မငှားကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။
18.06.18 အကောက်ခွန်သေးမီးဖိုချောင်စောင့်ရှောက်, တင့်ကားတင်ပို့ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူများမှာ
ကျနော်တို့လက်ရှိ 25.000 €ကျော်ကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူ, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်အတွက်ပီရူလိုင်းနားလယ်ယာနှင့် 25.000 €များအတွက် tools တွေကိုသွင်းဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနှင့်မြောက်အာဖရိကမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများန်းကျင်ရှိသည်။
ကျနော်တို့မော်ရိုကိုကနေတိုက်ရိုက်လွှင့်တဲ့ 24 နာရီကိုပေးပို့ဖို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးရန်သင့်အကူအညီနဲ့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါပီရူလိုင်းနားလယ်ယာတက်ကြွဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ဆီနီဂေါဆီသို့မော်တော်ယာဉ်ကားဆွဲနေတဲ့ Defender နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ဟင်းချိုမီးဖိုချောင်၏သွားလာရင်းပါစေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ Mauritania, ဆီနီဂေါနှင့်ဂမ်ဘီယာဆီသို့ဦးတည်တောင်ဘက်ခေါင်းကိုမော်ရိုကိုမဆိုအမြဲတမ်းနေထိုင်သူတွေရှိပါတယ်ကြိုးစားသင့်
တည်နေရာနှင့်တစ်ဦး Daueraufenthalsgenemigung ရဖို့။ သည်မှာကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအဖြစ်အာဖရိကမှတင့်ကားတင်ပို့ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
မိုဘိုင်း Tragekraxe အပေါ် 360 ဒီဂရီကင်မရာများ။ မိုဘိုင်းလယ်ပြင်စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူကားတစ်စီးမှ WLAN မှတဆင့် connection
11.05.18/XNUMX/XNUMX Defender & Caravan သည်အာဖရိကတိုက်ရှိကုန်ကျစရိတ်များကိုတတ်နိုင်သမျှနိမ့်ကျအောင်ထိန်းသိမ်းရန်
တိုက်ရိုက် streaming တစ်ဦးအပြန်အလှန်အတှေ့အကွုံအဖြစ်လူသားရဲ့ Facebook အတွက်ရုပ်ပြောင်ကျော်ဖြန့်ဖြူးစီမံကိုင်တွယ်။ Zombies မျှလူမျိုး, အရောင်သို့မဟုတ် Religion.Nur ဦးနှောက်ကိုသိ! နယ်ခြားမဲ့စီမံကိန်းကိုမရှိဘဲဖုတ်ကောင်တစ်ဦးအပြန်အလှန်အရန် swarm ပလက်ဖောင်းအဖြစ်သူ့ဟာသူမြင်သည်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ငံခြားဖုတ်ကောင်ကွန်ပျူတာများတစ်ခုဗဟု၏အနကျအဓိပ်ပါယျဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်သည်အသက်ရှင်စီးပေါ်တွင်ကြည့်ရှု၏အပြန်အလှန်အကူအညီအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှအဖြေတစ်ခုထက်လျော့နည်းအချည်းနှီးဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်: ကမ္ဘာကြီးကို Punken လောင်ကျွမ်းခြင်း၏ 24 နာရီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစီး။ စစ်ဇုန်အတွက်သတင်းထောက်တွေကိုသည် Kruger အမျိုးသားဥယျာဉ်အတွင်းရှိတရားမဝင်ကျားဖမ်းဘို့ဒုက္ခသည်စခန်းသို့မဟုတ်အမဲလိုက်ခြင်းအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများဖြန့်ဖြူးဖြင့်လိုက်ပါသွားဖြစ်နိုင်ခြေကျွန်တော်တို့ရဲ့ swarm ထိန်းချုပ်မှုကျွန်ုပ်တို့၏ tool ကိုလက်နက်ဖြစ်၏နေသောခေါင်းစဉ်: Facebook က၏စိတ်လှုပ်ရှားမှု icon များအရန် swarm ထိန်းချုပ်ပြုသောအမှုအရာကိုဆုံးဖြတ်။
နယ်စည်းမခြားဖုတ်ကောင်များ၏ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုမိုဘိုင်းဘက်ထရီ Tragekraxen အပါအဝင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနည်းပညာကိုဖြတ်ပြီးအများအပြားနေရာတွေ, သို့ဖြစ်. ဖြစ်၏ RTMP Facebook အများအတွက်အချိန်၏အဓိကပြဿနာများဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် Browser ကနေတစ်ဆင့်အပြုသဘောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပြည်တွင်းရေးကြိုးမဲ့ကင်မရာထိန်းချုပ်မှု, swarm ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အပြန်အလှန်ဒေတာဘေ့စဆော့ဖ်ဝဲ, လူများ add-ons တွေကိုကြီးမားတဲ့အုပ်စုများကိုထိန်းချုပ်ရန်စီးနေထိုင်ကြသည်။
ပထမဆုံးသောတိုက်ရိုက်စီးဆင်းသောနေရာများမှာဆီနီဂေါ၊ ပါလက်စတိုင်းနှင့်မော်ရိုကိုရှိကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဥရောပအချက်အချာဖြစ်သည်။ PixelHELPER သည်အခြားနိုင်ငံအားလုံးအားမော်ရိုကိုရှိ၎င်း၏တည်နေရာမှလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီများထောက်ပံ့လိုသည်။ မာဒါဂက်စကာသို့သွားသောလမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီတွင်အပြန်အလှန်သက်ရောက်နိုင်သော Livestream တည်နေရာတစ်ခုထည့်သွင်းလိုသည်။ Livestream နေရာများသည်ရေညှိစိုက်ခင်းကဲ့သို့သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုသတ်မှတ်သင့်ပြီးအာဖရိကတိုက်တွင်ကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ကိုပေးနိုင်ရန်အတွက်ဒုက္ခသည်များနှင့်အတူထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်သင့်သည်။ Livestream ရှိအရာအားလုံး၊ သင်အမြဲရှိနေပြီးဘာဖြစ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ တည်နေရာတိုင်းကိုနေ့အချိန်၌တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်ပြသထားပါသည်။ မက်ဒါဂက်စကာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖြစ်ပွားသောအဆုတ်ရောင်ရောဂါမှလူများကိုကာကွယ်ရန်ဂျော်ဂျီယာ phage ကုထုံးကို site ပေါ်တွင်အသုံးပြုလိုသည်။ လူသေတို့၏ဓလေ့ထုံးစံများအရကျွန်းစုသားများသည်ဥရောပအလယ်ပိုင်းရှိသန်းနှင့်ချီသောလူများကိုသေစေသည့်ရောဂါပိုးများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိကြသည်။
သင့် browser များတွင်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုစီးကြောင်းကိုအတွက် real-time အပြန်အလှန်အကူအညီပေးရေး။
နည်းပညာပိုင်းအရဤကဲ့သို့သောအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် live stream ကိုပွင့်လင်းမြင်သာသော control element များဖြင့်စတင်ကာသက်ဆိုင်ရာ“ နယ်နိမိတ်မရှိသော Zombies” ၀ န်ထမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ live stream သို့ဖိတ်ခေါ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်သောဒြပ်စင်များ၏ကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုကြည့်ပြီးအကျပ်အတည်း၏တည်နေရာရှိတိုက်ရိုက်စီးဆင်းမှုပြောင်းလဲမှုများကိုလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်သည်။
2014-2015 ကျနော်တို့တိုက်ရိုက်လွှင့် swarm အကူအညီနှင့်အတူပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံကိုစုဝေးစေ
ဂရပ်ဖစ် & လိုဂို: https://web.facebook.com/SNOB.desillustration
Stream swarm အကူအညီ Software Development အသကျရှငျ ဖေဖော်ဝါရီလ 3rd, 2019အိုလီဗာ Bienkowski